Ihe ị ga - eme mgbe ị wụnye Linux Mint 18.1 "Serena" | Site na Linux
Dị ka ọ dị na Linux Mint gara aga, taa m mechara mee ntinye dị ọcha Linux Mint 18.1 "Serena" na Cinnamon Desktop Environment, M na-eche ma ọ bụrụ na m ga-ebu ntuziaka ahụ Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Linux Mint 18.1 "Serena", n'ihi na ọ nwere ike ịdị ka ọ dịcha mma. A gbara m ume ime ya, na-emeziwanye ma na-emezi usoro ụfọdụ.
N'ime ụdị ọhụrụ a, anyị ga-enwe ike ịme ngwa niile na isiokwu ntinye isiokwu site na edemede, mana n'otu ụzọ ahụ, m ga-ahapụ otu esi eme ya iche, ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị hụrụ n'anya na-eji isiokwu na akara ngosi dị iche iche.
Ntuziaka dabere na nduzi m ka Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Linux Mint 18 "Sarah", na mgbakwunye na ndu ka anyi jiri Linux na Mint Linux kachasị 18 de Erik dubois (nke m si nweta ọtụtụ edemede ma hazie ha chọọ m).
Mint 18.1 Mint Linux
1 Kedu ihe ọhụrụ na Linux Mint 18.1 "Serena"?
3 Nzọụkwụ ịrụ mgbe ị wụnye Linux Mint 18.1 "Serena"
3.1 Gbaa ndị Mmelite Manager
3.2 Wụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala (kaadị vidiyo, ikuku, wdg)
3.3 Wụnye mkpọ asụsụ
3.4 Wụnye njikwa batrị
3.5 Wụnye git
3.6 Wụnye mmemme dị mkpa na akpaghị aka
3.7 Hazie ọdịdị
3.7.1 Ederede iji wụnye isiokwu kachasị mma maka Linux Mint 18.1
3.7.2 Ederede iji wụnye akara ngosi kachasị mma maka Linux Mint 18.1
3.7.3 Selecthọrọ Okwu na Oyiyi
3.7.4 Ederede iji wụnye nhazi nke kachasị mma maka Linux Mint 18.1
3.8 Wụnye ihe mgbochi ederede
3.9 Wụnye ngwanrọ iji kpọọ
3.10 Wụnye ihe ntanetị na nha ụda
3.11 Wụnye mmemme ndị ọzọ
3.12 Gụọ akwụkwọ ndị gọọmentị
3.13 Nyochaa usoro ohuru anyị
Kedu ihe ọhụrụ na Linux Mint 18.1 "Serena"?
Linux Mint 18.1 "Serena" bụ ọdụdụ nwa nke Linux Mint 18 ezinụlọ, ọ bịara na-edozi Cinnamon 3.2, MDM 2.0, Linux kernel 4.4 wee jiri Ubuntu 16.04 mee ihe dị ka ngwugwu ntọala. N'otu aka ahụ, Linux Mint 18.1 bụkwa LTS, yabụ ọ ga-enweta mmelite nche ruo mgbe 2021.
Mint Linux 18.1int Serena
N'otu ụzọ ahụ, njirimara kacha mkpa bụ ihe ndị a:
Imelitere sọftụwia ndabara na ụdị ndị kachasị ọhụrụ dị na agbakwunyela atụmatụ ọhụrụ.
Edegharịrị ihuenyo ahụ ma degharịa ya site na ncha na Python. Ọ bụghị naanị na ọ dị mma karịa, ọ dịkwa oke ọsọ ọsọ, na-azaghachi ma nwekwaa nhazi karịa nke ochie.
Mmezi nkwado ngwaike.
Incorporation nke vetikal.
Tda apụl nwere ike ijikwa ọtụtụ ntinye.
Arụ ọrụ nke mmalite menu emelitere ma emelitere ka enwere ike ịnyagharịa ya site na keyboard.
Onye njikwa melite a na-enye anyị ohere ka anyị mata mbido ngwugwu a.
Linux Mint 18.1 na-abịa na ọtụtụ desktọọpụ gburugburu, ọtụtụ usoro a rụrụ na nduzi a (ma ọ bụrụ na ọ bụghị ha niile) dakọtara na desktọọpụ ọ bụla.
Nzọụkwụ ịrụ mgbe ị wụnye Linux Mint 18.1 "Serena"
Otu Mint na-ekewa mmelite na ọkwa ise nke nchekwa / ihe egwu, na ntinye nke 4 na 5 si Ubuntu anaghị atụ aro maka ndị ọrụ novice, n'ihi na a na-enyo enyo ma ọ bụ mara na ha nwere ike ibute enweghị ike ma ọ bụ gbuo sistemụ. Ihe anyị na-eme site na ịmalite iwu sudo apt-nweta nweta nkwalite site na njedebe bụ ịwụnye mmelite niile, ma ọ bara uru ma na-emerụ ahụ maka Mint, nke nwere ike ibute nsogbu ụfọdụ.
Ọ bụrụ na ị wụnye Linux Mint 18.1 na laptọọpụ gị, ana m akwado ka ị wụnye njikwa batrị nke ga-enye gị ohere ijikwa ụgwọ na nchapu batrị gị maka ha, anyị ga-agbaso usoro ndị a:
Erik dubois emeela nnukwu mmelite na edemede ya maka ntinye ngwa ngwa, isiokwu na akara ngosi, yabụ anyị ga-eji ya dochie nke anyị mere na ụdị maka Linux Mint 18. CNa ya ị nwere ike iwunye ngwa ndị a na ụfọdụ ndị ọzọ:
Iji mee ntinye a, ị ga-emerịrị iwu ndị a:
Ọ ga - amalite usoro ogologo nke ga - ebugo distro gị, wụnye mmelite niile, hichaa OS, wụnye ọtụtụ ngwa dị mkpa, wụnye isiokwu na akara ngosi. Na nkenke, site na ịde ederede a, Linux Mint 18.1 "Serena" gị ga-adị njikere ịnụ ụtọ ya dịka o kwesiri.
Enwere ọtụtụ ụzọ iji hazie Linux Mint 18.1 gị, ọtụtụ n'ime ha bụ n'efu, enweghị m oge dị ukwuu iji wụnye ihe n'otu n'otu, gaa nyocha na ihe ndị ọzọ, yabụ ana m eji akwụkwọ edemede 3 nke ga-enyere anyị aka ịwụnye. isiokwu dị iche iche, akara ngosi na ntọala maka conky.
Ederede iji wụnye isiokwu kachasị mma maka Linux Mint 18.1
Ederede a ga-arụnye ihe ndị a na-akpaghị aka gburugburu maka Linux Mint 18.1
Ederede iji wụnye akara ngosi kachasị mma maka Linux Mint 18.1
Ederede a ga-arụnye ihe ndị a na-akpaghị aka akara ngosi maka Linux Mint 18.1
Linux mint gburugburu 18.1
Ederede iji wụnye nhazi nke kachasị mma maka Linux Mint 18.1
Ka Conky wee gbaa ọsọ mgbe Linux Mint 18.1 Serena malitere, anyị ga-agbaso usoro ndị a:
Site Linux Mint menu gaa aplicaciones al inicio, wee tinye ma mepụta otu na aha ya conky na iwu conky
N'ikpeazụ, anyị na-echere echiche gị banyere ntuziaka: Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Linux Mint 18.1 "Serena"
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Linux Mint 18.1 "Serena"
Ihe 54 kwuru, hapụ nke gị
Enwere m kaadị nvidia 960m, mgbe m wụnye ọkwọ ụgbọala nke cinnamon mgbe ịmalitegharịrị ọ gwara m "cinnamon dị na ị kwụsịrị ugbu a na-agba ọsọ na ọnọdụ Fallback"
Otu ihe ahụ mere m na ihe ngwọta nke rụụrụ m ọrụ bụ imechi nnọkọ ahụ wee bido kwa nnọkọ ahụ ọzọ, na-edozi nsogbu ahụ nke emebeghị ọzọ.
Hapụ ndetu maka Linux Mint 18.1 Cinnamon
Na laptọọpụ NVIDIA Optimus, onye ọkwọ ụgbọ ala kwadoro ka echichi ndị ọkwọ ụgbọ ala NVIDIA.
Ndị ọkwọ ụgbọala a na-agbakwunye nkwado maka NVIDIA Prime, nke na-enye gị ike ịgbanwe n'etiti NVIDIA na Intel chipset.
Mgbe ị wụnye ndị ọkwọ ụgbọala a, ịkwesịrị ịmalitegharịa kọmputa ahụ ka ha buru.
Mgbe ị na-agbanyeghachi, esemokwu na-egbochi NVIDIA praịm na-arụ ọrụ nke ọma na nke a ga-eme ka Cinnamon daa.
Nanị pụọ na abanye azụ iji dozie esemokwu a
Emechaala m na ọ ka bụ otu.
Biko ị nwere ike ịnwale ihe damart gosipụtara ma gwa anyị ọzọ etu ị si eme.
N’oge na-adịbeghị anya, a gbara m ume ịnwale ojiji nke Linux, ọkachasị Linux Mint 18 Cinnamon ma ọ dị m ka ọ bụ nkesa na-adịghị mfe ma dịkwa nfe, m wụnye ya na boot abụọ n’ihi na ime ihe n’eziokwu, m ka na-atụ egwu ịhapụ Windows maka oge niile m ji ya. [mana taa ana m eji Mint were 80%]
Na mgbakwunye na Office Libre nke na-abịa na ndabara, Wps Office bụ ihe na-atọ ụtọ, ọ bụ ezie na ndakọrịta ya na ndọtị abụghị ihe na-emeghe. Docx,. Xlsx na. Pptx ruo taa abụghị 100% dakọtara na Libre Office.
Maka ugbu a enwere m ike ịhụ na Linux kwụsiri ike, nchekwa na ngwa ngwa, nnukwu ihe. M nwere ya arụnyere na a 64 bit igwe na dị ka a free software novice m ga-anọgide na-eji ya.
Obi dị m ezigbo ụtọ na ị na-enye onwe gị ohere iji Linux, Linux Mint 18 bụ nnukwu distro, nke siri ike na nke kensinammuo maka ndị ọrụ ọhụụ. Ekwadoro m onye ndu mmalite nke Linux https://blog.desdelinux.net/guia-para-principiantes-en-linux/ nke ahụ ga - enyere gị aka ilekwasị anya na sistemụ arụmọrụ.
Anyị nwere olile anya na a ga-enyekwu ndị mmadụ dị ka gị ohere ịnwale sistemụ arụmọrụ nke na-enye gị ohere ịnwe onwe gị ma bụrụ onye nwe nke ọrụ ọ bụla o nwere.
Berta Trias dijo
Ndewo ndị enyi,
M arụnyere mmelite a (Erik Dubois) na echere m na agbaghara m ụfọdụ nzọụkwụ dị mkpa tupu m malite ịmalitegharịa usoro ahụ iji gaa n'ihu na nhazi nke Luigys Toro chọrọ, nke m hụrụ na-atọ m ezigbo ụtọ.
Ihe merenụ bụ na reboot anaghị achọpụta paswọọdụ m na enweghị m ike ịnweta sistemụ ahụ.
Onwere onye nwere ike inyere m aka biko. M na-eji Mint eme ihe naanị oge ụfọdụ, mana m ka dị ọhụrụ na ntanetị ndị a.
Zaghachi Berta Trias
Pịa akara + alt + f2 ị ga-enweta ọnụ. Biko gbalịa nbanye ebe ahụ wee malite gburugburu ebe ngosi eserese na Startx -. Gwa anyị ka o si aga.
The nkuzi dị nnọọ mma dị ka mgbe niile.
Enwere m olile anya na ị ga-anụrị ya ma ọ bara gị uru.
Camila egwu dijo
Ndewo, nkuzi ahụ dị mma, mana enwere m nsogbu ụfọdụ
na ọnụ m jisiri ike wụnye iwu na-esonụ
gee clone https://github.com/erikdubois/themes-icons-pack.git
mgbe ahụ mgbe ị na-etinye ./all-in-once-installation_deb_themes.sh yana iwu ndị na-eso site ugbu a gaa (akara ngosi, wdg) ọ na-agwa m na ndekọ ahụ adịghị adị, biko ị nwere ike ịchọpụta na ihe niile dị mma na faịlụ ahụ ma ọ bụ mmadụ kọwaa ihe m ga - eme maka mpụta ahụ, kelee gị ma kelee gị nke ukwuu !!!
Zaghachi Camila Torres
Ga-ebu ụzọ banye isiokwu-akara ngosi-mkpọ ndekọ… Site ọnụ pịnyere ndị na-esonụ: cd themes-icons-pack /
Ndewo, site na ndekọ ndekọ mgbọrọgwụ gị ị ga-enye iwu «cd themes-icons-pack» mgbe ahụ ị mezuo iwu ahụ
Ọ dị ezigbo aka, daalụ bro !!
Nnukwu post, ezigbo ọrụ!
M dee ya maka ule di n'ihu,
Enwere m olileanya na ule ndị ga-eweta afọ ojuju n'ọdịnihu.
Daalụ nke ukwuu maka ịza ajụjụ.
Isiokwu a bụ ihe m kpọrọ ezigbo ọkwa banyere Desktọpụ. Agbanyeghị ruo taa anaghị m etinye LinuxMint ma ikekwe tinye Cinnamon na Jessie, ha na-enye ọchịchọ ịrịgo Mazi Mint, nkesa kachasị eji taa dịka distrowatch.com ... Debian sochiri. 😉
Ọ bụrụ na ọ bụghị maka ezigbo nsogbu m nwere ijide ebe nchekwa na ịnweta ịntanetị ...
Ekele na ihe ịga nke ọma, Ezigbo Luigys!
Gerardo Ramíres dijo
Daalụ nke ukwuu maka ntuziaka a, ọ bụ ihe kachasị mma maka m ... ndụmọdụ ahụ ziri ezi ...
Daalụ - jisie na ọganiihu
Zaghachi Gerardo Ramíres
Ndewo, ụgbọ mmiri ị na-eji iji nwude?
Onwere onye n’ime unu nwere ike ịwụnye apache, php, mysql-server na phpmyadmin na ụdị a? Enweghị m ike ịpị nsụgharị 18 na nke a
Zaghachi Orlando Nuñez
Ndewo, ekele maka nkuzi, ọ zuru oke, naanị otu ihe, mgbe ị na-etinye isiokwu ahụ
Ọ na-agwa m ihe ndị a:
Faịlụ ma ọ bụ ndekọ adịghị
N'ikpeazụ, etinyeghị isiokwu ndị ị kwuru banyere ya.
Adan garcia dijo
Mgbe nbudata, ị ga-etinye onwe gị na nchekwa «themes-icons-pack» with the command «cd themes-icons-pack /» wee dee «./all-in-once-installation_deb_themes.sh»
Zaghachi Adan Garcia
Ndewo. tupu imezu iwu ahụ, ị ​​ga-agbanwe ndekọ. Site na folda ụlọ ị ga-ehichapụ iwu na-esote: "cd themes-icons-pack"
Mgbe ahụ ị na-agba ọsọ iwu "./all-in-once-installation_deb_themes.sh"
mbụ ị ga-pịnye na ọnụ iwu na-esonụ
I meela nke ukwuu, amataghị m banyere edemede ndị ahụ ịkekọrịtara, m na-ejikarị aka aka eme ihe niile, ọ bụ ezie na ọ dịghị ọtụtụ, ebe ọ bụ na amara nke mint bụ na ị wụnye ma jiri
nkuzi na-adọrọ mmasị ma bara ezigbo uru maka ezigbo nhazi nke mint serena.Ejiri m windo ruo ọtụtụ afọ na otu ụbọchị dị mma ekpebiri m ịnwale linux wee bido na ubuntu kylin nke distro e mere maka chinitos dị ka ọ na-akwụsi ike ma ọ bụ na ọ maghị etu esi arụ ọrụ. Site na sistemụ ahụ, agbalịrị m ọtụtụ distros ndị ọzọ na nke ọ bụla n'ime ha m mụtara ntakịrị, achọghị m windo ndị ọzọ ma maka m ọ dịtụghị ala n'iji linux jiri m mee ihe na windo mmemme mana m gara n'ihu na Linux wee gbalịa Linux Mint 17.3 onye ọlụlụ masịrị m ya nke ukwuu m ji ya ogologo oge m gbalịrị ịmụ ojiji nke Linux Achọrọ m ịgbalite desktọọpụ 3D emere m ọgụ ahụ mana enweghị m ike mana nke ahụ egbochighị m na m ga-achọ Linux na ka m si nwee ezigbo mkpebi na ihe mara mma m tinyeworo Linux Mint serena 18.1 bụ echiche efu ... Mint bụ distro nke na-arụ ọrụ ọ bụla na igwe ọ bụla ọbụlagodi ndị nwere obere ego ,, .. kwupụtara ,, ugbu a anaghịzị m agbanwe Linux ka m na-amata ya enwere mnyere na o nwere ego zuru oke maka ọrụ ọ bụla .. Linux maka azụmahịa ma ọ bụ iji onwe ya bụ sistemụ arụmọrụ kachasị mma M NA-anọ na ya ... enyi ekele maka nkuzi nkuzi maka ndị dị ka gị na-arụ ọrụ maka eziokwu dị mfe nke inye aka
Pedro Damian Caldera Sánchez dijo
Ndewo enyi, nkuzi nke a dị mma. Enwere m nsogbu na nke ahụ bụ na enweghị m ike imeghe folda na ọnụ ya. Mgbe m mere cloning na iwu ndị a: git clone https://github.com/erikdubois/themes-icons-pack.git na m gbalịrị itinye iwu a na ọnụ: ./all-in-once-installation_deb_themes.sh gwara m na ndekọ ahụ adịghị adị. Ihe ọzọ mgbe emechara klọọkụ a, m kwesiri ịmalitegharị igwe ma ọ bụ mechie ọrụ ahụ? Dị ka m ga-emeghe akpa akpa cloned site na ọnụ.
Zaghachi Pedro Damián Caldera Sánchez
Nkuzi magburu onwe ya n’agbanyeghi sistem na ụtọ asụsụ.
Enweghị m ike ịwụnye akara ngosi ọ na-agwa m na ọ nweghị ike ịchọta ndekọ ahụ ma emere m cd ihe. Enweghị m ike ịwụnye akara a
Abụ m onye ọhụrụ 🙁
ị ga-agbakwunye "./" na mbido ọ ga-adị ka nke a ./all-in-once-installation_deb_icons.sh
mma m doziri ya site na ịga na folda gburugburu ebudatara
Zaghachi leo juarez
Alberto dị iche iche dijo
Agba m dara mgbe m hụrụ ntuziaka a, enwere m anya n'anya n'anya, m na-eji manjaro wee gaa ngwa ngwa ibudata Linux Mint 18.1 Serena Enwere m olileanya na ọ dị mma maka ntuziaka ahụ.
Zaghachi Alberto vargas
Ezigbo ọrụ. Ekele m. Abụ m onye ọhụrụ, mana m na-amụ ihe. Enyemaka. Ana m arapara ebe a: ~ / Halo $ ./get-aureola-from-github-to-local-drive.sh
bash: ./get-aureola-from-github-to-local-drive.sh: Faịlụ ma ọ bụ ndekọ adịghị adị
Kedu ka m ga-esi wepu conky ahụ?
Gbaa edemede dị ka ọ na-ekwu ebe ahụ, wụnye Asura conky, mana kedu ka m ga-esi wepu ihe niile ahụ ebe ọ bụ na enweghị Akwụkwọ Nsọ iwepu dị ka ọ dị na isiokwu na akara ngosi.
ebe m chọpụtara na onwere ihe a na-akpọ conky manager ma ọ bụrụ na ị na-agba ya, ọ na-agabiga otu conky na onye ọzọ.
M ka nwere mmasị ịmara otu esi ewepụ conkys na folda ya niile. Maka ụbọchị ọ na-ewe iji wepu ha
Eduardo R. dijo
Ọ bụrụ na m chọrọ ime nke a mana na KDE, kedu ihe ga - abụ usoro a na - arụ n’ide ọ bụla mgbe a na - - - - - eche? Mmadụ ọ ga-enwe obi ọma kọwaa n'ụzọ zuru ezu? Daalụ
Zaghachi Eduardo R
Humbero E dijo
Magburu onwe ya, abụ m onye ọhụụ ma ebe ahụ ka anyị na-amụta ekele
Zaghachi Humbero E
Ndewo, ihe niile dị mma, gụọ, edemede nke isiokwu na akara ngosi ka ejiri maka Linux Mint Mate 18.1? Echere m azịza gị. daalụ
Abụ m onye Linuxmint hụrụ n'anya, mana enwere m ọkwọ ụgbọala na-ada ụda. M na-etinye ya na igwe ahụ dị ka nke zuru oke, ọ na-etinye ọkwọ analog, mana mgbe m melite nchịkọta ọ na-agbachi nkịtị ma gosi m naanị mmepụta ụda HDMI. ihe m na-eme?? kaadị ahụ bụ intel.
Alfonso, banye na folda Aureola: cd Aureola
wee dee: ./get-aureola-from-github-to-local-drive-v1.sh
Ha agbanweela edemede a ntakịrị (-v1)
Ndewo, ekele maka onyinye, ajụjụ banyere isiokwu na akara ngosi ga-eji maka ụdị 18.1 KDE ??, enwere olile anya na ị ga-aza m. Daalụ
ndewo onye obula mgbe emechara edemede ya ./
./ isi mmalite /
./ isi iyi / electron.asar
Ọ bụ Sergio Vargas dijo
Mgbe ị na-eme ihe ndị ahụ erikdubois ọ na-ajụ m maka aha njirimara na okwuntughe, mmadụ ọ ga-ama ihe ọ bụ? Daalụ maka enyemaka gị.
Zaghachi Sergio Vargas
Ndewo enyi, aka m nọ ebe ahụ, mana achọla m nke bụ Erik Dubis
Dị ka Sergio enwere m nsogbu na aha njirimara na paswọọdụ, ndị m tinyere Akiles anaghị arụ ọrụ maka m
ndewo Enwere m ajụjụ Akwụkwọ Nsọ a na-arụkwa ọrụ maka Linux mint 18.2 xfce
Ndewo onye ọ bụla, lee, ọ bụụrụ m ezigbo enyemaka, ibe a emechara m ihe niile ị na-ekwu kama site na mkpuru clo https://github.com/erikdubois/themes-icons-pack.git Ọ bụ ihe ikpeazụ m nwere ike ime ndị ọzọ, ọ gwara m na ahụghị mgbọrọgwụ folda ma ọ bụ ihe yiri ya ... Abụ m ihe ọhụrụ mana ọ dị oke ọhụrụ na linux a nke mere na m wụnye ya ihe na-erughị 2 awa gara aga ma ọ masịrị m ... Ekele m na-eche azịza
My ikpe bụ ihe ijuanya n'ihi na m si na iji nkesa ebe ihe kacha mkpa bụ iji zere ọ bụla na-abụghị free software ma ọ bụ ọkwọ ụgbọala na niile ụgwọ, na ọma, o doro anya na Linux Mint ejiri a dị iche iche iwu, M na-eche a bit iju iji a distro dị ka nke a ma ọ bụ ihe ọ na-emetụ. The interface dị mma nke ukwuu na ihe niile na-eme ka anya dị ka ị malitegharịa mgbe nwụnye, mmelite, ndị ọkwọ ụgbọala microcode, kpochapụwo Windows ttf. Emebeghị m usoro nke ngwanrọ ahụ na-abịa na git ahụ n'ihi na ekpebibeghị m ụdị sọftụwia m ga-etinye ma ọ ga-abụ aka, enwere m ike ịme nke ahụ na isiokwu na akara ngosi n'ihi na ụfọdụ dị ezigbo mma. Ka o sina dị, lee mgbanwe site na Trisquel na Parabola gaa na xD a
Ndewo, ekpebiri m ịnwale Linux, nkuzi a na-arụ ọrụ maka nsụgharị 18.2 Sonya
Ana m anwa ịwụnye ya, mana enwere ihe m na-aghọtaghị, dịka ịchọrọ ịwụnye halo na-ekwu na ị banye na folda iji wụnye edemede ahụ, amaghị m otu esi abanye.
Nke a bụ ihe na-atụghasị m na Linux mgbe niile, dị mgbagwoju anya maka ndị ọhụrụ
Ndewo. Wụnye Linux mint 18. Achọrọ m enyemaka ijikọ ngwa nbipute HP LaserJet Pro M102w. Daalụ
onyinye dị oke mma daalụ, mana enwere m ajụjụ, mgbe m mechichara folda maka akara ngosi, na-etinye onwe m na nchekwa-icons-pack folder ma na-eme ihe niile-ince-installation_deb_icons.sh ọ na-agwa m na faịlụ ma ọ bụ ndekọ ahụ adịghị adị.
ma kwa oge a na - emechi ebe nchekwa na itinye onwe m na folda aureola maka conky na ime ya ./get-aureola-from-github-to-local-drive.sh ọ na - agwa m otu ihe ahụ na faịlụ ma ọ bụ ndekọ ahụ adịghị adị.
N'ụlọ enwere folda nchekwa - icons-pack, na njedebe cd / ma kpochie adreesị ebe folda ahụ dị, n'ọnọdụ m ọ ga - adị ka nke a
cd / ulo / onye nzọpụta / gburugburu-icons-mkpọ… ..na ozugbo ahụ ị kụrụ ọnụ: ./all-in-once-installation_deb_themes.sh
otu ihe na akara ngosi ... cheta na tupu «niile ...» ị ga-etinye ./
Onyinye magburu onwe ya, mana kedu ka anaghị esi etinye m niile na ntanetị ahụ, naanị ndị m na-etinye aka.
Ule Clouding.io, ezigbo ihe ngosi nke Cloud Servers na Spain